Xasuuqa dhacaya: Shalay iyo Maanta! | Somali - Diaspora
Monday 1 October 2012 – “Qatar ma ahan qaylada dheer ee xadgudbayaasha, balse, waa aamuska xun ee dadka wanaagsan!” Martin Luther King, Jr (January 15, 1929 – April 4, 1968).
Ku meel gaarkii waa laga baxay! Dawlad daa’im ah baa dhalatay – aanse laga bixin, aqriste, bal sii goob qormadii ahayd: “Ku meel gaarkii ma laga baxay?!”- xildhibaanno xor ah baa la xulay, Guddoonka Baarlamaanka Mudane Prof ah baa loo doortay, madaxweyanana la mid, Ra’iiusl wasaarana sidoo kale baa la sugayaa, waxa la sugaaba waa Golaha Wasiirrada uu soo dhisi doono.
Erayadan waa kuwa ugu badan ee aad dadka ka maqlayso, iyagoo yididiilo muujinaya, aqriste, bal soo goob qormadii ahayd: “Aragti gaaban iyo alalaas gundhigay!”.
Sidoo kale, Kenya waxay duqayn ba’an ka gaysatay magaalada Jilib, ee Gobolka Jubbada Dhexe, dadka waxyeellada ugu darani ka soo gaartay, waxaa u badnaa carruur iyohaween, waliba qoys qura ka koobnaa, duqayntaa Kenya waxay caddaysay inay Alshabaab duqaysay! Bal adba….
Sida caadada ah, ciidan walba oo wadanka ku soo xadgudba waxaa horjooga rag Soomaali ah. 1996, 97, 98 Gobolka Gedo waxaa horsocday dad deegaanka soo jeeda, 1998Gobolka Baay waxaa hor socday dad deegaanka ka soo jeeeda. 2006, 07, 08 waxaa horsocday Dawladdii C/laahi Yuusuf uu madaxweynaha ka ahaa. 2011, 2012 mar kale deegaanka Baay waxaa hor boodayey dadka deegaanka ah. Gobollada Dhexe waxaa horboodayey Ahlusuunna, sidoo kale, marka laga soo tago Keenyaanka ciidaan ahaan waxaa horboodaya Gaandi iyo Xasan Madoobe, oo marba magac la baxaya, Kooxda Raaskambooni iyo Maamulka Azaania.
Soomaaliya waa dhibbanaha cudurka loogu yeero LA DAGAALLANKA ARGAGIXISADA, shalay Xabashi ayaa sidaa ku soo gashay wadanka, maantana ku soo gambanaysa,Kenyaaba ka dartay oo taagan waa inaan dabar goynna, aan su’aal duldhigee: xaggay jirtay intaan la daalaa dhacaynnay dhibka argagixisada? Maxay markaa noogu gacan siin waayeen ciribtirkooda? Dadkowgow waa inaad garataan meerisyada jaban ee hadalka, haddii kale waxba noo cayman maayaan.
Dadka waxaan ka dareemayaa dabacsanaan dheeraad ah, marka loo eego sida xaalku ahaa sanado ka hor iyo siduu maanta yahay, mise waa Muqdisho ha yimaadeenee sug, oo ah marka ay Muqdisho yimaadaan ayey dadku kacayaan, inta ka horraysa nuuxsan maayaan, ma garan sheekada caynkaa ah, maxay ku kala duwan yihiin Kalabayr,Kismaayo iyo Muqdisha? Intuba waa dhul ay Soomaali leedahay, kii lagu soo xadgudbaa waa kiisa kale.
Madaxdii Hore ee Madaxtooyada Somaliya soo maray iyo Madaxda Cusub ee hadda qabsatay Maxey ku kala duwanyihiin!!? Madaxweyne Xasan Sheekh oo Iska Bareejeeyay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif (Muxuu sameeyay)